Makhaayadda Iyo Maqaayadda
Makhaayadda Iyo Maqaayadda Fikradda naqshadeeda ayaa laga soo qaatay steak-ka Mareykanka iyo qiiqa qiiqa, iyada oo ay sabab u tahay kooxdii cilmi-baarista wejiga koowaad, kooxda cilmi-baarista waxay go’aansadeen in ay u isticmaalaan alwaax iyo maqaar leh midabyo madow sida madow iyo cagaar, oo ay weheliso dahabka iyo ubaxa. dahab waxaa la qaatay iftiin qafiif ah oo fudud. Astaamaha nashqadeynta ayaa ah 6 chandeliers waaweyn oo ganaax ah oo ka kooban 1200 oo bir gacmeed ka sameysan bir ka samaysan. Sidoo kale miisaska 9 mitir ee bar, oo ay ku jiraan dallad 275 sintimitir ah oo ka kooban dhalooyin qurux badan oo kala duwan, iyada oo aan wax taageero ahi daboolayn miiska baarka.
Cilmi Baarista Iyo Horumarinta Qaab Dhismeedka
Talaado 16 Bisha Labaad 2021
Cilmi Baarista Iyo Horumarinta Qaab Dhismeedka Mashruuca qaab dhismeedka Xarunta Teknolojiyada wuxuu hayaa sida hagida isukeenida qaab dhismeedka qaab dhismeedka goobta muuqaalka ah, meel deggan oo raaxo leh. Qeexiddan Fikradda ah waxay ka dhigeysaa isu imaatinka astaan bini aadamnimo, loo dejiyay aasaaska caqliga leh ee cilmi baadhayaasha ku shaqeyn doona, oo lagu muujiyey caag ahaan iyo ujeedo wax dhisid leh. Qaabdhismeedka iyo naqshadeynta isku dhafan ee saqafka guryaha ee loo yaqaan 'concave and convex' waxay u dhowdahay inay taabato xariiqyada xariiqda toosan ee qeexaya sidaas, astaamaha ugu muhiimsan ee dhismaha qaab dhismeedka.
Isniin 15 Bisha Labaad 2021
Nashqadeynta Gudaha Midabka cirridka waxaa loo arkaa inay caajis tahay. Laakiin maanta midabkani waa mid ka socda madax-tooyada qaababka noocan ah sida loft, minimalism iyo hi-tech. Cawlan waa midab doorbidida asturnaanta, xoogaa nabad ah, iyo nasasho. Waxay inta badan martiqaadaa kuwa, kuwaas oo la shaqeeya dadka ama ku hawlan baahiyo garasho, midab guud oo gudaha ah. Darbiyada, saqafka, alaabta guryaha, daahyada, iyo dabaqyadu waa cawlan. Dhiroonka iyo fadhiga cirridka ayaa kala duwan oo keliya. Dahabka waxaa lagu daray faahfaahin dheeri ah iyo alaabada. Waxaa xoojiya xargaha sawirka.
Axad 14 Bisha Labaad 2021
Guri U adeegsiga alwaaxda sida sheyga ugu waxtarka badan ee dhismaha, gurigu wuxuu isaga qaxayaa labadiisa heer ee qaybta, isaga oo dhalinaya saqaf dhalaalaya si uu ula falgalo duruufaha una oggolaado nalka dabiiciga ah inuu galo. Dhererka laba jibbaaran wuxuu qeexayaa xiriirka ka dhexeeya sagxadda dhulka, dabaqa sare iyo muuqaalka dhulka. Saqaf bir ah oo ka sarreeya iftiinka cirka, wuxuu ka ilaaliyaa dhacdada qoraxda reer galbeedka wuxuuna si rasmi ah dib u dhiska mugga, ujeedka aragtida deegaanka dabiiciga ah. Barnaamijka waxaa lagu qeexay iyada oo lagu xareynayo adeegsiga dadweynaha dhulka sagxadda ah iyo isticmaalka khaaska ah ee dabaqa sare.
good morning original calendar 2012 “Farm” Kalandarka Arbaco 3 Bisha Saddexaad
inci Ceramik Talaado 2 Bisha Saddexaad
Prisma Qalabka Curyaameysan Ee La Qaadi Karo Ee Ultrasonic Isniin 1 Bisha Saddexaad
Salon Timaha Beerta Khaaska Ah Makhaayadda Iyo Maqaayadda Cilmi Baarista Iyo Horumarinta Qaab Dhismeedka Nashqadeynta Gudaha Guri